Hindiya si ay ugu biirto Shiinaha mamnuucida dhammaan lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Hindiya si ay ugu biirto Shiinaha mamnuucida dhammaan lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Hindiya • Investments • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Hindiya si ay ugu biirto Shiinaha mamnuucida lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'
Mamnucii hore ee Hindiya ee cryptocurrency ayaa la rogay bishii Abriil 2020, taasoo horseeday suuq cryptocurrency ah oo kobcaya.
Sharci cusub oo abuuri doona qaab lagu dhisayo lacag dhijitaal ah oo rasmi ah oo 'mamnuucaysa dhammaan cryptocurrencies gaarka ah ee Hindiya' ayaa lagu daray ajandaha soo socda ee baarlamaanka Hindiya.
Qorshe lagu mamnuucayo dhammaan lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ayaa yimid maalmo uun kadib Raiisel wasaaraha India Narendra Modi Waxyaabaha lagu murmay sida bitcoin waxay ku dambayn karaan 'gacmo khaldan oo 'dhalliya dhallinyaranimadayada'.
Soo jeedin cusub ayaa maanta lagu dhawaaqay Lok Sabha, xubinta Hindiyagolaha wakiilada. Waxay noqon doontaa ajandaha sharci-dejinta marka la isugu yimaado kalfadhiga jiilaalka ee Noofambar 29.
HindiyaMamnucii hore ee cryptocurrency ayaa la rogay Abriil 2020, taasoo horseeday suuq cryptocurrency ah oo kobcaya. Iyadoo aan la hayn xog rasmi ah, qiyaasaha warshadaha ee ay soo xigatay Reuters ayaa dhigay tirada maalgashadayaasha crypto ee Hindiya inta u dhaxaysa 15 iyo 20 milyan oo qof, oo leh hanti qiimaheedu dhan yahay 400 bilyan rupees ($ 5.4 bilyan).
Si kastaba ha ahaatee, dawladda dhexe ee New Delhi aad ayay u xamaasad badnayd. Toddobaadkii hore, PM Modi Waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in dhammaan dalalka dimuqraadiga ahi ay ka wada shaqeeyaan lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' sida bitcoin, iyo "in la hubiyo in aanay ku dhammaanayn gacmo khaldan, taas oo kharribi karta dhallinyaradeenna."
Bangiga dhexe ee Hindiya ayaa muujiyay "walaac halis ah" oo ku saabsan lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' sida bitcoin ama ethereum, wuxuuna sheegay bishii Juun inay ka shaqeynaysay lacagteeda dhijitaalka ah, si loo soo bandhigo dhamaadka sanadka.
Shiinaha ayaa si wax ku ool ah u mamnuucay bitcoin bishii Sebtembar, isaga oo mamnuucay dhammaan dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee la xiriira crypto ee guriga iyo mamnuucista sarifka lacagaha qalaad inay ganacsi la sameeyaan maalgashadayaasha dhul weynaha.
Dhanka kale, qaranka Bartamaha Ameerika ee El Salvador ayaa ku dhawaaqay bitcoin qandaraas sharci ah oo ay weheliso doollarka Mareykanka, waxayna dejiyeen tas-hiilaad macdaneed crypto oo ku shaqeeya tamarta geothermal ee folkaanaha.